ကံတရားကအချိန်တန်ရင် သေလုမျောပါးဖြစ်နေချိန်မှာလည်း ကောက်ခါငင်ခါနဲ့ ကံကောင်းတတ်ပါတယ် – Local News
သူမနဲ ပတ်သက်ပြီး HD ဗီဒီယိုတင်ကြတဲ့သူတွေကို ဒဲ့ပြောလာတဲ့ သံသာမိုးသိမ့်... August 6, 2020
အမေစုကို ချစ်တဲ့သူတွေ Like & Follow သွားလုပ်လို့ ရပီနော် နိုင်ငံတော် ၏ အတို... August 6, 2020
ပရိတျသတျ စကားနားထောငျပွီး အံ့မငျးညိုကို ကွျောငွာချေါရိုကျလိုကျတဲ့ ဖွူဖွူထှေး... August 6, 2020
ဘောင်ဘီဇစ်မဆွဲမိပဲ TIK TOK ဆော့ခဲ့တဲ့ ရွှေအိမ်စည်…(ရုပ်သံ)... August 6, 2020
စိတ်ဝင်စားမှုအရှိန်မြင့်တက်နေသည့် ပခုက္ကူသီဟိုဋ်ရှင်ဘုရားကြီးအတွင်းရှိ မြေအောက်လို... August 6, 2020
ကံတရားကအချိန်တန်ရင် သေလုမျောပါးဖြစ်နေချိန်မှာလည်း ကောက်ခါငင်ခါနဲ့ ကံကောင်းတတ်ပါတယ်
ထိုင်းနိုင်ငံနခွန်ဖနုမ်ခရိုင် ဖုန်းစဝမ်မြို့နယ် ဆေးရုံမှာ ကျမ္မာရေးမကောင်းလို့တက်ရောက်ကုသနေတဲ့ နုံချာလှတဲ့အဖိုးအိုနဲ့အဖွားအိုတို့လည်း ယနေ့ထိုင်းထီ ပထမဆုကြီး ဘတ် ၆ သန်းဆုကို ဆွတ်ခူးလိုက်တယ်ဆိုတာသိရလို့ ကုတင်ပေါ်ကလူမမာရဲ့အပြုံးကရောဂါတစ်ဝက်ကိုသက်သာသွားစေပါပြီ။
နံပါတ်တူထီနှစ်စောင်ထဲက တစ်စောင်သာကံစမ်းခဲ့ပေမယ့် ယခုလိုကျမ္မာရေးချို့တဲ့နေချိန် ထီထပေါက်တာဟာ ကံထူးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့
ထိုင်းထီကတစ်ခုကောင်းတယ် အက္ခရာစဉ်မပါဘူး ၊ ဘတ် ၆ သန်းဆုကစပြီး ကျန်တဲ့ဆုတွေအားလုံး နံပါတ်တူတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက် ပထမဆုကြီးကိုမျှဝေပေါက်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် ၊ တတ်နိုင်လို့ နံပါတ်တူ ၁၀ စောင်တွဲထိုးနိုင်ရင်လည်း ဘတ်သန်း ၆၀ ပေါက်ခွင့်ရှိပါတယ်..
မြန်မာထီဆုကြီးကိုလည်း သိန်းပေါင်း ၁ သောင်းခွဲကို ၅ ထောင်ဆုကြီးအဖြစ် အက္ခရာဖြုတ်ပြီး နံပါတ်တူတွေများများရိုက်နှိပ်ရောင်းသင့်တယ်.
ဒါဆိုရင် ပေါက်တဲ့သူများတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်.. အခုကအက္ခရာတူမှပေါက်ဘို့ကံကလည်းမလွယ်ရေးချမလွယ်ပါ..လား ( စဉ်းစားမိတာပါ )
Photo Crd #Sirirat Somjee
ထိုငျးနိုငျငံနခှနျဖနုမျခရိုငျ ဖုနျးစဝမျမွို့နယျ ဆေးရုံမှာ ကမ်ြမာရေးမကောငျးလို့တကျရောကျကုသနတေဲ့ နုံခြာလှတဲ့အဖိုးအိုနဲ့အဖှားအိုတို့လညျး ယနထေို့ငျးထီ ပထမဆုကွီး ဘတျ ၆ သနျးဆုကို ဆှတျခူးလိုကျတယျဆိုတာသိရလို့ ကုတငျပျေါကလူမမာရဲ့အပွုံးကရောဂါတဈဝကျကိုသကျသာသှားစပေါပွီ
နံပါတျတူထီနှဈစောငျထဲက တဈစောငျသာကံစမျးခဲ့ပမေယျ့ ယခုလိုကမ်ြမာရေးခြို့တဲ့နခြေိနျ ထီထပေါကျတာဟာ ကံထူးတယျလို့ပွောရမှာပေါ့
ထိုငျးထီကတဈခုကောငျးတယျ အက်ခရာစဉျမပါဘူး ၊ ဘတျ ၆ သနျးဆုကစပွီး ကနျြတဲ့ဆုတှအေားလုံး နံပါတျတူတှအေမြားကွီးရှိတဲ့အတှကျ ပထမဆုကွီးကိုမြှဝပေေါကျကွတဲ့သူတှလေညျးရှိပါတယျ ၊ တတျနိုငျလို့ နံပါတျတူ ၁၀ စောငျတှဲထိုးနိုငျရငျလညျး ဘတျသနျး ၆၀ ပေါကျခှငျ့ရှိပါတယျ..
မွနျမာထီဆုကွီးကိုလညျး သိနျးပေါငျး ၁ သောငျးခှဲကို ၅ ထောငျဆုကွီးအဖွဈ အက်ခရာဖွုတျပွီး နံပါတျတူတှမြေားမြားရိုကျနှိပျရောငျးသငျ့တယျ.
ဒါဆိုရငျ ပေါကျတဲ့သူမြားတော့ ပိုကောငျးတာပေါ့နျော.. အခုကအက်ခရာတူမှပေါကျဘို့ကံကလညျးမလှယျရေးခမြလှယျပါ..လား ( စဉျးစားမိတာပါ )
ဆွာမြို့ရဲ့ကျပ်သိန်း2000ကံထူးရှင် သား‌ငယ်လေးကညင်အိုင်‌ကျေးရွာမှာ ​မောင်ဘုန်းမင်းခန့်ပါရှင့်
(၁၈)ကြိမ်မြောက် သိန်း(၅၀၀၀) ကံထူးရှင်လေး မောင်ပြည့်ဖြိုးဇော်…
သူမနဲ ပတ်သက်ပြီး HD ဗီဒီယိုတင်ကြတဲ့သူတွေကို ဒဲ့ပြောလာတဲ့ သံသာမိုးသိမ့်
အမေစုကို ချစ်တဲ့သူတွေ Like & Follow သွားလုပ်လို့ ရပီနော် နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် အသုံးပြုမည့် ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာသစ် စတင်ထွက်ပေါ်
ပရိတျသတျ စကားနားထောငျပွီး အံ့မငျးညိုကို ကွျောငွာချေါရိုကျလိုကျတဲ့ ဖွူဖွူထှေး
ဘောင်ဘီဇစ်မဆွဲမိပဲ TIK TOK ဆော့ခဲ့တဲ့ ရွှေအိမ်စည်…(ရုပ်သံ)
စိတ်ဝင်စားမှုအရှိန်မြင့်တက်နေသည့် ပခုက္ကူသီဟိုဋ်ရှင်ဘုရားကြီးအတွင်းရှိ မြေအောက်လိုဏ်ခေါင်းကို ဂေါပကအဖွဲ့ မှစမ်းသပ်အဖြေရှာ